Myanmarxxx, 1 on one webcam sex | UK
ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုမွာလည္း စစ္တပ္ကိုမုန္းတဲ့ ျပည္သူေတြဆိုတာ ရွိတာကိုး...အဲ့ဒီထဲကမွ Picts လူမ်ိဳးစုတစ္စုဟာ စစ္တပ္ကို ေသေလာက္ေအာင္ မုန္းတီးေနသူေတြျဖစ္ၿပီး တိုက္ရည္ခိုက္ရည္လည္း ေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ ေရာမအႀကီးအကဲေတြေတာင္ အက်ပ္႐ိုက္ ေၾကာက္လန္႔လာရပါတယ္...အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ၾကမ္းေပ့ဆိုတဲ့ Ninth Legion တပ္ဖြဲ႕ႀကီးကို ဖိတ္ေခၚၿပီး အဆိုပါလူမ်ိဳးစုေတြကို သြားေရာက္ႏွိမ္နင္းခိုင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ေရာမစစ္တပ္နဲ႔ Picts လူမ်ိဳးစုေတြ ေတြ႕ၾကပါေတာ့တယ္...ခ်န္ဂင္ဆိုျပီး နာမည္ႀကီးတဲ့ Jo Jung-eun ရဲ႕ ငယ္ရုပ္အလွကိုပါ ခံစားႏိုင္မွာပါ...ဒီကားေလးကေတာ့ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ၅ ႏွစ္သားကေလးေလးကို ျပန္ေပးဆြဲ သတ္တဲ့အမႈနဲ႔ ေထာင္က်သြားခဲ့သူတစ္ေယာက္အေႀကာင္းပါ... သူဘာေတြ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားတာက ဘာလဲ...အေျဖကို ဇာတ္လမ္းႀကည့္မွ သိႏိုင္မွာပါ... Unicode ******* Thriller ကားမျိုးမှာ ဒီလိုမျိုး IMDb 7.6 လောက်ရတာရှားတယ်လို့ပြောရပါမယ် ဒီတစ်ခါတော့ psycho ဆန်ဆန်ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Thriller/Horror ဇာတ္ကားေလးေလးပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတစ္ဖြဲ႕ဟာ လူခ်မ္းသာအမ်ိဳးသမီးအိမ္မွာေန႔စား အလုပ္သမားအျဖစ္ဝင္လုပ္ရာကေန ထူးျခားတဲ့ ကိစၥေတြ ႀကံဳလာရပါေတာ့တယ္ ထို အိမ္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးဟာ တစ္ျခားလူေတြ နဲ႔ အဆက္အဆံ မလုပ္ပဲ လင္မယား ၂ ကိုယ္ထဲ ၿခံ၀န္းအက်ယ္ႀကီး နဲ႔ အိမ္အေကာင္းစား နဲ႔ ေနၾကတာပါ ...Unicode ******* IMDb 6.6 ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး Dark Comedy/ Horror ကားပရိတ်သတ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ် ဇာတ်ကားနာမည်နဲ့လိုက်ဖက်စွာပဲ ကမ္ဘာပျက်တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပါ ထူးခြားတာက တစ်ကားလုံးသရုပ်ဆောင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ နာမည်အရင်းတွေ career အစစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါပဲ Harry Potter မင်းသမီးလေး Emma Watson ရော Rihanna ရော ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ နာမည်ကျော်မင်းသား James Franco ကသူ့ LA ကအိမ်သစ်ကြီးမှ အိမ်သစ်တက်ပွဲပါတီကျင်းပပါတယ် နာမည်ကျော်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ခမ်းခမ်းနားနားပါပဲ တခြားနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေအဆိုတော်တွေလည်း လာကြတာပေါ့ အဲ့အချိန်မှာမှ ကောင်းကင်ပေါ်ကအပြာရောင်အလင်းတန်းတွေ ကျလာပြီး လူတွေကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတော့... (Unicode) MDb 6.7/10 Google Users 90% ဒီတစ်ခါတော့ ဘောလီဝုဒ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် Rom-Com ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ ၂၀၁၉ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ၁၀ ကား စာရင်းဝင်တစ်ကားဖြစ်သလို အချစ်ဟာသဇာတ်မြူးတွေသာရိုက်လေ့ရှိတဲ့ ဒါရိုက်တာ Akiv Ali ရဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး ပိုစတာပေါ်မှာ Romantic Comedy Movie ဆိုပြီးရေးရေးထားပြီးပေါပေါလောလောတွေ တင်ဆက်နေတဲ့ ကိုယ်တွေဆီက မြန်မာကားတွေအနေနဲ့ ဒီလိုကားတွေကနေ ပညာယူသင့်ပါတယ် Rom-Com ဆိုတာဘာလဲ ဟာသဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ဖို့ အိုကြီးအိုမတွေက ပေါတောတောတွေ လုပ်ပြစရာမလိုသလိုဗလတောင့်တောင့် အစ်ကိုကြီးတွေကလည်း ခြောက်ပြစရာမလိုပါဘူး သေခါနီးဘွားတော်ကြီးတွေ ရွပြဖို့မလိုသလိုချာတိတ်တွေက လူကြီးသူမတွေကို သောက်ပေါတွေပါလို့ အမြင်မှားအောင် ရိုက်ပြစရာမလိုပါဘူး ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကလိထိုးပြီး မရယ်ရဖို့အရေးကြီးပါတယ် ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ Rom-Com ဆိုတဲ့အတိုင်းRomance အခန်းတွေမှာလည်း ကြည်နူးစရာတွေဖြစ်စေသလိုComedy အခန်းတွေမှာလည်း တွေးတွေးပြီးရယ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်စေပါတယ် ဒီတော့ မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားကို ခံစားကြည့်လိုက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့အချိန် ၃ နာရီဝန်းကျင် အလကားမဖြစ်စေရဘူးလို့ အာမခံပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးပြောပြရရင် ... Zawgyi ******* 2012 ခုႏွစ္က ထြက္ရွိထားၿပီး IMDb 8.4 အထိရရွိထားတဲ႔ဇာတ္ကားေကာင္းပါပဲ လူမည္းေတြ အေမရိက မွာ အႀကီးအက်ယ္ အႏိုင္က်င့္ ရက္စက္ ကြ်န္ျပဳတာ ခံေနရခ်ိန္ . (Unicode) ၂၀၁၉ထွက် တေလဂူး (telugu)အချစ်၊အက်ရှင် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေး အကြည်ထွက်လာလို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကတော့ Geetha Govindam က မင်းသား Vijay Devarakonda နဲ့မင်းသမီး Rashmika Mandannaပါပဲ။ (မင်းသမီးကတော့ ယွန်းဝတီလွှင်မိုးပါပဲ) အညွန်း..ဇာတ်ကားနာမည်ကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ချစ်လှစွာသော သွေးသောက်ရဲဘော်တဲ့။ "သွေးသောက်ရဲဘော်ဆိုတာ ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေကို ဝန်းရံပေးပြီး တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပေးတဲ့လူ"ပဲမဟုတ်လား။ ဇာတ်လမ်းစစချင်းမှာဘော်ဘီဆိုတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် မူးရူးသောက်စားပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ လီလီဆီ ဖုန်းခေါ်ဖို့ အတင်းကြိုးစားနေတယ်။ လီလီ...ဒါေပမဲ့ ဆြန္ဂ်ဴးတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ အမွတ္တမဲ့မွ အမွတ္တရတစ္ခုရရိွသြားျပီး ႏွလံုးသားမွာ ေ၀ဒနာတစ္ခုကိန္းေအာင္းသြားပါတယ္... IMDb Rating (7.9) Rotten Tomatoes (95%) Hero (2002) …………………
honest man,very reliable,a open minded who doesn’t disrespect!… continue reading »
I picked up my phone for the first time in over2weeks and saw what 18 days worth of notifications looked like. I didn’t want to get outaglass so I went to the bathroom and drank from my hand.… continue reading »